Vanorarama neHIV/AIDS vachiratidzira nekurara pasi pazuva rekucherechedza World Aids Day kuMasvingo.
Apo Zimbabwe yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Aids Day kuMasvingo neSvondo, vanhu vanorarama neHIV/AIDS varatidzira pamberi pegurukota rezvehutano nekuchengetedzwa kwevana, Doctor Obadiah Moyo, vachiti vanoda mishonga navanachiremba muzvipatara, umo vanoti hamusisina kumira zvakana nekuda kwekuramwa mabasa kwavanachiremba.
VaMoyo, ndivo vanga vari munyarikani mukuru pamhemberero idzi, idzo dzaitirwa munhandare ye Mucheke Stadium.
Vanachiremba vave nemwedzi mitatu vachiramwa mabasa vachida kuti hurumende igadziririse nyaya dzemihoro yavo pamwe nemashandiro avo.
Amai Moreen Musanzu, vanove mukuru anoona nezvemabasa musangano reZimbabwe Aids Network iro rine nhengo dzaro dzaratidzira, vanoti ivo vange vasiri kuwana mukana wekusvitsa mashoko avo kuna VaMoyo segurukota rezvehutano, nekudaro pavangowana mukana uyu.
VaEmmanuel Gasa, vanove mumwe wevanhu varatidzira nekurara pasi VaMoyo vachitaura, vanoti ivo varatidzira kuti vaudze hurumende kuti muzvipatara hamuna kumira zvakana kuvanhu vanorarama nehutachiwana, avo vavanoti vari kufa nekushaiwa mishonga pamwe navanahiremba vanovarapa.
Vanochengetedza runyararo pamwe nevashandi vebazi rezvehutano vambozama kudzinga vange vachiratidzira ava asi varamba vakarara izvo zvazoita kuti vanhu vange vauya kuzocherechedza zuva iri vamire kuteerera mashoko egurukota vachitora mifanidzo yevanga vachiratidzira ava.
VaGasa vanoti vafara kuti kuratidzira kwavo kwabudirira, uye mashoko avo asvika kune gurukota iro vanoti razotumira vashandi vebazi raro vakati vachaita musangano kuHarare.
Kunyange VaMoyo varamba kupindura mibvunzo yevatori venhau nezvekuratidzira kwaitika pamberi pavo, vaudza vanhu kuti hurumende iri kukoshesa kurwisa HIV neAIDS kuti vanhu vazhinji vasarasikirwe nehupenyu.
Vaenderea mberi vachiti hurumende ichavaka chipatara chikuru chedunhu, cheMasvingo Central Hospital chinove chipatara chepamusoro chinenge chiine nyanzvi dzakasiyanasiyana pamwe nemichina yemhando dzepamusoro, vachiti kubva nyika ichiwana kuzvitonga dunhu rose raive risina riine General Hospital chete.
Vati izvi zvichabatsira mukurwisa chirwere cheshuramatongo mudunhu reMasvingo.
Vachitaurawo pamhemberero iyi, gurukota redunhu reMasvingo, VaEzra Chadzamira, vati vanotenda kuti dunhu rikavakirwa chipatara che Masvingo Central Hospital zvichabatsira mukurapwa kwezvirwere zvakasiyanasiyana kuvanhu vemudunhu ravo rose.
Vachitaurawo pamusangano uyu, mutevedzeri wemumiriri wemuzinda weAmerica, VaThomas Hastings, vanoti nyika yavo icharamba ichibatsira Zimbabwe nemari pamwe nemishonga mukurwiswa kwe HIV/AIDS.
VaMoyo vatiwo dunhu reMasvingo rine vanhu vanopfuura miriyoni, pavanhu ava zviuru zana nemakumi mashanu vanorarama nehutachiwana uye vakanyanya kuwanda madzimai nevana vadiki.
Vati hurumende icharamba ichishanda nemasangano akazvimirira pamwe nemizinda yedzimwe nyika mukurwisa chirwere kuti chidzikire munyika.
Gore rino zuva iri racherechedzwa nedingindira rinokurudzira kuti matunhu atungamire pakuunzwa kweshanduko, kana kuti “Communities make the Difference”.
Sangano reNational Aids Council, iro rakabatana nebazi rezvehutano mukutungamira hurongwa uhwu, ranga richipawo veruzhinji magwaro anopa dzidziso pamusoro peHIV/AIDS.
Sangano iri ranga richishandawo nevanorarama nezvepabonde mudunhu reChiredzi mukurudzira vanhu kuti vavhenekwe ropa, uyewo kupa dzidziso pamusoro peshuramatongo.